အာဆီယံမြန်မာ ဆက်ဆံရေး ရှေ့ခရီး အာဆီယံဆိုင်ရာ NUG သံအမတ်ကြီး အမြင်
Bo Hla-Tint, the exiled government's Minister of Foreign Affairs and member of the National League in Myanmar
အာဆီ-ယံမြန်မာ ဆက်ဆံရေး ရှေ့ခရီး အာဆီယံဆိုင်ရာ NUG သံအမတ်ကြီး အမြင်
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ အာဆီယံရဲ့အစဉ်အလာမဟုတ်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းနေတာတွေဟာ စစ်ကောင်စီဘက်က မှန်မှန်ကန်ကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဒီအခြေအနေမှာ NUG အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG က အသစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ အာဆီယံဆိုင်ရာ သံတမန် ဦးဘိုလှတင့်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ သံတမန်ရေးနဲ့ အာဆီယံဒေသအရေး ကျွမ်းကျင်သူ စင်္ကာပူနိုင်ငံသူ Noleen Hezer ကို ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့အတွက် မြန်မာ့အရေး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကိုင်တွယ်မှုအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်မလဲ။
မအင်ကြင်းနိုင်က ဦးဘိုလှတင့်ကို Zoomကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင် ။. ။ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့ အာဆီယံအနေနဲ့ ဒီတခေါက် မြန်မာအရေးမှာတော့ အဖွဲ့ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသစ်တွေ ချိုးဖောက်ရင် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဒီနှစ် အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲက ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ NUG အာဆီယံဆိုင်ရာ သံတမန်သစ် ဦးဘိုလှတင့် က ဗွီအိုအေ ကိုပြောပါတယ်။
ဦးဘိုလှတင့် ။.။ အာဆီယံရဲ့ ချာတာထဲမှာသည်ပင်လျှင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစာက သူရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လေးစားလိုက်နာလိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်တယ်ဆိုရင် သူတို့မပါပဲနဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကို ဒီနေ့ ၂ဝ၂၁ အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကနေ ပြလိုက်တယ်လို့ ကျနော်ပြောကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ အာဆီယံက အစဉ်အလာမဟုတ်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးကို စတင်ဆောင်ရွက်တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းပဲ ဒီအခြေနေကောင်းမှာ အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံပြသာနာကိုသာမက ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာမှု ပဋိပက္ခတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခတွေထိ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်။ ထိုးဖောက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျနော်တို့ ခုလို အာဆီယံ သံတမန်တွေခန့်အပ်ပြီးတော့ ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင် ။. ။ NUG ဖက်က အာဆီယံနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပေမယ့်NUG ကို အာဆီယံဖက်က တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက် ဘယ်လိုအတိုင်းအတာမျိုးနဲ့ NUG က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာလည်း ဦးဘိုလှတင့် ကတော့ အခုလိုတုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။
ဦးဘိုလှတင့် ။. ။ အဲဒီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ အသိအမှတ်ပြုမူရရှိဖို့ကတော့ ကျနော်တို့ဖက်က ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာပိုပြီးတော့ စနစ်ကျမှုနဲ့ ထိရောက်ဖို့လိုအပ်သလို စစ်အုပ်စုရဲ့ အရည်အသွေးညံဖျင်းမှုကလည်း အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ကျနော်တို့က ယုံကြည်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဆီယံအနေနဲ့ ယုံကြည်ပြီးတော့ လက်တွဲနိုင်မယ့် စုဖွဲ့မှုနဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအစိုးရဟာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပဲဖြစ်တယ်။ လက်ရှိစစ်ကောင်စီကတော့ အာဆီယံက ယုံကြည်ကိုးစားလက်တွနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမှာ မရှိဘူးဆိုတာ စစ်ကောင်စီက သက်သေပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း သက်သေပြမယ်ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်မှုကတော့ အာဆီယံခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင် ။.။ တချိန်တည်းမှာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် စင်္ကာပူနိုင်ငံသူ Noeleen Heyzer ကို ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လိုအမြင်ရှိပါသလဲလို့ ဦးဘိုလှတင့် ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာ
ဦးဘိုလှတင့် ။. ။ အခုလို အသစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ သံတမန်ရေးအတွေ့အကြုံရော အရင်က အာဆီယံရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာတွေမှာရော အတွေ့ကြုံနဲ့ ရင့်ကြက်မှုရှိသူ သံတမန်တဦးကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စကတောဖြစ် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ပျော့ပြောင်းတဲ့ သဘောထားတခုကိုပြပေးလိုက်တယ်။ တကယ်လို့ အရင်တုံးက Special Envoy နဲ့ အဆင်မပြေပေမယ်လို့ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခက်ခဲတွေကိုလည်း ပါဝင်ဖြေရှင်းပေးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိသူ သံတမန်တယောက်ကို ခန့်အပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ ပိုပြီးတော့ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားကောင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ အဲဒီအပေါ်မှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပြင်လယ်ပြုလွယ် ပျော့ပြောင်းတဲ့ သဘောထားကို ပြတဲ့အနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်လို့ ကျနော်သုံးသပ်မိပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင် ။.။ အရင်အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener ကတော့ စစ်အာဏာသိမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းစစ်တောင်လောင်မှုကို ဦးတည်နေပြီး ပြသာနာတွေဖြေရှင်းနိုင်ရေး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကို ရာထူးကဆင်းပေးဖို့အထိတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအသစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်က သူအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခြေလှမ်းအတိုင်းသွားဖို့ရှိမလား။ ဒါမှမဟုတ် အပြောင်းအလဲရှိမလား။ ဦးဘိုလှတင့် အမြင်က
ဦးဘိုလှတင့် ။. ။ ဒီစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကပင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပဋိပက္ခအားလုံးရဲ့ အရင်းအမြစ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြသာနာများကို အပြုသဘောဆောင် ချည်းကပ်မှုနဲ့ အဖြေရှာသည်ဖြစ်စေ၊ ဖိအားပေးနဲ့ အဖြေရှာသည်ဖြစ်စေ၊ အဓိကကတော့ စစ်ကောင်စီဟာ နိုင်ငံတကာမိသားစု ဒေသတွင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ရိုးရိုးသားသားတက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သာသည်တာလျှင် သို့မဟုတ်လိုကတော့ ဒေသတွင်းဖိအားပေးမှုတွေများမလာဘူးလို့ မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင် ။.။ NUG အာဆီယံဆိုင်ရာ သံတမန်သစ် ဦးဘိုလှတင့် ဟာ အရင်က NCGUB အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အာဆီယံမြန်မာ ဆက်ဆံရေး ရှေ့ခရီး NUG သံအမတ်ကြီး အမြင်
အာဆီ-ယံမွနျမာ ဆကျဆံရေး ရှခေ့ရီး အာဆီယံဆိုငျရာ NUG သံအမတျကွီး အမွငျ
မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ပတျသကျလို့ အာဆီယံရဲ့အစဉျအလာမဟုတျတဲ့ ဆောငျရှကျခကျြတှနေဲ့ရှဆေ့ကျလြှောကျလှမျးနတောတှဟော စဈကောငျစီဘကျက မှနျမှနျကနျကနျပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတှေ မရှိခဲ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ဖွဈပွီး ဒီအခွအေနမှော NUG အစိုးရအနနေဲ့အာဆီယံနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ ကွိုးစားသှားမှာဖွဈတယျလို့ NUG က အသဈခနျ့အပျလိုကျတဲ့ အာဆီယံဆိုငျရာ သံတမနျ ဦးဘိုလှတငျ့က ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
တခြိနျတညျးမှာပဲ သံတမနျရေးနဲ့ အာဆီယံဒသေအရေး ကြှမျးကငျြသူ စင်ျကာပူနိုငျငံသူ Noleen Hezer ကို ကုလအတှငျးရေးမှူးခြုပျရဲ့ မွနျမာဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျ အဖွဈခနျ့အပျလိုကျတဲ့အတှကျ မွနျမာ့အရေး ကုလသမဂ်ဂရဲ့ ကိုငျတှယျမှုအပျေါ ဘယျလို သကျရောကျမှုတှရှေိနိုငျမလဲ။
မအငျကွငျးနိုငျက ဦးဘိုလှတငျ့ကို Zoomကနေ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
အငျကွငျးနိုငျ ။. ။ မူဝါဒပိုငျးဆိုငျရာ အားနညျးခကျြတှရှေိနတေဲ့ အာဆီယံအနနေဲ့ ဒီတခေါကျ မွနျမာအရေးမှာတော့ အဖှဲ့ရဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးသဈတှေ ခြိုးဖောကျရငျ အရေးယူဆောငျရှကျနိုငျတယျဆိုတဲ့ နညျးလမျးတှရှေိနတေယျဆိုတာကို ဒီနှဈ အာဆီယံထိပျသီးဆှေးနှေးပှဲက ပွလိုကျတာဖွဈတယျလို့ NUG အာဆီယံဆိုငျရာ သံတမနျသဈ ဦးဘိုလှတငျ့ က ဗှီအိုအေ ကိုပွောပါတယျ။
ဦးဘိုလှတငျ့ ။. ။ အာဆီယံရဲ့ ခြာတာထဲမှာသညျပငျလြှငျ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတနိုငျငံရဲ့ အုပျခြုပျသူလူတနျးစာက သူရဲ့အရညျအသှေးနဲ့ အဖှဲ့ဝငျ အဖှဲ့ရဲ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို လေးစားလိုကျနာလိုကျနာဖို့ ပကျြကှကျတယျဆိုရငျ သူတို့မပါပဲနဲ့ ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားနိုငျဖို့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှလေညျးရှိတယျဆိုတာကို ဒီနေ့ ၂ဝ၂၁ အာဆီယံထိပျသီးဆှေးနှေးပှဲကနေ ပွလိုကျတယျလို့ ကနြျောပွောကွရမှာဖွဈပါတယျ။ အဲတော့ အာဆီယံက အစဉျအလာမဟုတျတဲ့ ဆောငျရှကျခကျြမြိုးကို စတငျဆောငျရှကျတဲ့ အနအေထားမြိုးမှာ ရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကနြျောတို့ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရကလညျးပဲ ဒီအခွနေကေောငျးမှာ အာဆီယံအဖှဲ့အစညျးဟာ မွနျမာနိုငျငံပွသာနာကိုသာမက ဒသေတှငျးဆိုငျရာ လူသားခငျြးစာနာမှု ပဋိပက်ခတှေ၊ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ပဋိပက်ခတှထေိ ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနိုငျတဲ့အဖှဲ့အစညျးဖွဈလာဖို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရမယျ။ ထိုးဖောကျဆောငျရှကျရမယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ကနြျောတို့ ခုလို အာဆီယံ သံတမနျတှခေနျ့အပျပွီးတော့ ကွိုးပနျးဆောငျရှကျမှုဖွဈပါတယျ။
အငျကွငျးနိုငျ ။. ။ NUG ဖကျက အာဆီယံနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတှရှေိတယျဆိုပမေယျ့ NUG ကို အာဆီယံဖကျက တရားဝငျအစိုးရအဖွဈ အသိအမှတျပွုဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတဲ့ သုံးသပျခကျြတှရှေိနတေဲ့အတှကျ ဘယျလိုအတိုငျးအတာမြိုးနဲ့ NUG က ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှာလညျး ဦးဘိုလှတငျ့ ကတော့ အခုလိုတုံပွနျပွောဆိုပါတယျ။
ဦးဘိုလှတငျ့ ။. ။ အဲဒီ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုနဲ့ အသိအမှတျပွုမူရရှိဖို့ကတော့ ကနြျောတို့ဖကျက ကွိုးပနျးဆောငျရှကျမှုတှဟော ပိုပွီးတော့ စနဈကမြှုနဲ့ ထိရောကျဖို့လိုအပျသလို စဈအုပျစုရဲ့ အရညျအသှေးညံဖငျြးမှုကလညျး အထောကျအကူဖွဈလိမျ့မယျလို့လညျး ကနြျောတို့က ယုံကွညျထားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အာဆီယံအနနေဲ့ ယုံကွညျပွီးတော့ လကျတှဲနိုငျမယျ့ စုဖှဲ့မှုနဲ့ အုပျခြုပျမှုအစိုးရဟာ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရပဲဖွဈတယျ။ လကျရှိစဈကောငျစီကတော့ အာဆီယံက ယုံကွညျကိုးစားလကျတှနိုငျလောကျတဲ့အနအေထားမှာ မရှိဘူးဆိုတာ စဈကောငျစီက သကျသပွေခဲ့ပွီးသားဖွဈတယျ။ ဆကျလကျပွီးတော့လညျး သကျသပွေမယျဆိုရငျတော့ ရှေးခယျြမှုကတော့ အာဆီယံခေါငျးဆောငျမှုရဲ့အပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။
အငျကွငျးနိုငျ ။. ။ တခြိနျတညျးမှာ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျ စင်ျကာပူနိုငျငံသူ Noeleen Heyzer ကို ကုလအတှငျးရေးမှူးခြုပျရဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကိုယျစားလှယျအဖွဈ ခနျ့အပျလိုကျတဲ့အပျေါမှာ ဘယျလိုအမွငျရှိပါသလဲလို့ ဦးဘိုလှတငျ့ ကိုမေးကွညျ့တဲ့အခါမှာ
ဦးဘိုလှတငျ့ ။. ။ အခုလို အသဈခနျ့အပျလိုကျတဲ့ စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ သံတမနျရေးအတှအေ့ကွုံရော အရငျက အာဆီယံရဲ့ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားတဲ့နရောတှမှော အကူအညီဖွနျ့ဖွူးတဲ့နရောတှမှောရော အတှကွေုံ့နဲ့ ရငျ့ကွကျမှုရှိသူ သံတမနျတဦးကို အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျ ရဲ့ကိုယျစားလှယျအဖွဈခနျ့အပျလိုကျတဲ့ ကိစ်စကတောဖွဈ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ မွနျမာနိုငျငံစဈကောငျစီနဲ့ဆကျဆံရေးမှာ ပြော့ပွောငျးတဲ့ သဘောထားတခုကိုပွပေးလိုကျတယျ။ တကယျလို့ အရငျတုံးက Special Envoy နဲ့ အဆငျမပွပေမေယျလို့ ယုံကွညျလကျခံနိုငျတဲ့ မွနျမာပွညျရဲ့ အခကျခဲတှကေိုလညျး ပါဝငျဖွရှေငျးပေးတဲ့ အတှအေ့ကွုံရှိသူ သံတမနျတယောကျကို ခနျ့အပျလိုကျလို့ရှိရငျတော့ ပိုပွီးတော့ စဈကောငျစီအနနေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျလိမျ့မယျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ထားကောငျးထားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မိုလို့ အဲဒီအပျေါမှာ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ ပွငျလယျပွုလှယျ ပြော့ပွောငျးတဲ့ သဘောထားကို ပွတဲ့အနနေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုလုပျနိုငျအောငျ ပွငျဆငျပေးလိုကျတယျလို့ ကနြျောသုံးသပျမိပါတယျ။
အငျကွငျးနိုငျ ။. ။ အရငျအထူးကိုယျစားလှယျ Christine Schraner Burgener ကတော့ စဈအာဏာသိမျးခံထားရတဲ့ မွနျမာနိုငျငံဟာ ပွညျတှငျးစဈတောငျလောငျမှုကို ဦးတညျနပွေီး ပွသာနာတှဖွေရှေငျးနိုငျရေး ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ကို ရာထူးကဆငျးပေးဖို့အထိတောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုအသဈခနျ့အပျလိုကျတဲ့ အထူးကိုယျစားလှယျက သူအရငျလုပျခဲ့တဲ့ အထူးကိုယျစားလှယျရဲ့ခွလှေမျးအတိုငျးသှားဖို့ရှိမလား။ ဒါမှမဟုတျ အပွောငျးအလဲရှိမလား။ ဦးဘိုလှတငျ့ အမွငျက
ဦးဘိုလှတငျ့ ။. ။ ဒီစဈကောငျစီကိုယျတိုငျကပငျလြှငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ ပဋိပက်ခအားလုံးရဲ့ အရငျးအမွဈပေါ့။ အဲဒီတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ပွသာနာမြားကို အပွုသဘောဆောငျ ခညျြးကပျမှုနဲ့ အဖွရှောသညျဖွဈစေ၊ ဖိအားပေးနဲ့ အဖွရှောသညျဖွဈစေ၊ အဓိကကတော့ စဈကောငျစီဟာ နိုငျငံတကာမိသားစု ဒသေတှငျးဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးနဲ့ ရိုးရိုးသားသားတကျတကျကွှကွှ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသာသညျတာလြှငျ သို့မဟုတျလိုကတော့ ဒသေတှငျးဖိအားပေးမှုတှမြေားမလာဘူးလို့ မပွောနိုငျတော့ပါဘူး။ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အငျကွငျးနိုငျ ။. ။ NUG အာဆီယံဆိုငျရာ သံတမနျသဈ ဦးဘိုလှတငျ့ ဟာ အရငျက NCGUB အဝေးရောကျ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရရဲ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး အဖွဈလညျး တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူဖွဈပါတယျရှငျ။
စစ်ကောင်စီအပေါ် အာဆီယံတင်းကြပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NUG အမြင်